လစာများ | လစာစစ်တမ်း | ပျှမ်းမျှလစာ - MyLasar.com
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း စုံစမ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဖက်များ နည်းစနစ် သတင်းခန်း
MMK EUR USD
လက်ရှိဖြေဆိုထားသူပေါင်း 4,304 ရှိပါသည်။
သင့်ရာထူးကိုရှာပြီး သင့်လိုရာထူးဖြင့်အခြားသူများမည်မျှရနေသည်ကို ရှာဖွေပါ။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပရောဖက်ရှင်နယ်လစာစစ်တမ်း ဖြင့် သင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းလစာကိုခေတ်မှီနှုန်းထား သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
မားကတ်တင်းဝန်ထမ်းတွေအတွက် ဘယ်အရည်အချင်းက အရေးပါဆုံလဲ?
02 . Sep
မားကတ်တင်းသမားတွေအနေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ ဈေးကွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကြားမှာ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် အပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ကိုယ့် အရည်အချင်းကို လိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးတွေကို ပိ...
ပေးလပ်(ဖ့်) ကွဲပြားမှုအကြောင်းလေ့လာချက် - ဘယ်အလုပ်ခွင်တွေမှာ ၀န်ထမ်းတွေက ကွဲပြားတဲ့အလုပ်အဖွဲ့တွေရှိသလဲ?
နိုင်ငံတကာ Paylab ကွဲပြားမှုအကြောင်းလေ့လာချက် တွေက ဥရောပမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်း ဆယ်ယောက်မှာ လေးယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့လက်ရှိ အလုပ်ခွင်မှာ ကွဲပြားမှုတွေမကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကွဲပြားမှုတွေဆိုတဲ့အထဲမှာ အလု...
လစာစစ်တမ်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် profile များကို
လက်ထောက်ဆရာ/မ ပညာရေး၊သိပ္ပံနှင့်သုတေသန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မသိ 180,000 MMK
ဒေတာဖြည့်သွင်းအော်ပရေတာ(စီမံ) စီမံခန့်ခွဲမှု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုမ္ပဏီကြီး ၂၅-၃၄ 305,000 MMK
အငယ်တန်းစာရင်းကိုင် စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး၊ စားရင်းအင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုမ္ပဏီကြီး <၂၄ 351,000 MMK
လူငယ်လုပ်သား ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်မှု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုမ္ပဏီကြီး <၂၄ 154,000 MMK
စီးပွားရေးအသိပညာရှင် သတင်းအချက်လက်နည်းပညာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလယ်လတ်ကုမ္ပဏီ ၂၅-၃၄ 1,030,000 MMK
တင်ဒါစာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလယ်လတ်ကုမ္ပဏီ <၂၄ 394,000 MMK
အကြီးတန်းလက်ထောက် ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလယ်လတ်ကုမ္ပဏီ ၂၅-၃၄ 758,333 MMK
ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုမ္ပဏီငယ် ၂၅-၃၄ 250,000 MMK
အိတ်ရှ်အာအကူ လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုမ္ပဏီကြီး <၂၄ 250,833 MMK
ဒီဂျီတယ်စျေးကွက်မြင့်တင်ရေးပညာရှင် စျေးကွက်မြင့်တင်ရေး၊ကြော်ငြာ၊လူထုဆက်ဆံရေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလယ်လတ်ကုမ္ပဏီ <၂၄ 300,000 MMK
အလုပ်အင်တာဗျူး (သို့) လစာညှိနှိုင်းမှု အတွက်ပြင်ဆင်ရန်
ကျွန်တော်/မက ၀န်ထမ်းလစာ သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေရှာနေတာပါ
MyLasar.com ကိုအသုံးပြုရန်ထောက်ပံ့ထားသော browser ကို download လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် MyLasar.com ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်များနှင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် MyLasar.com ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်၏ဘရောင်ဇာသည်ထိုနည်းပညာများကိုမထောက်ပံ့ပါ။
မင်းရဲ့ browser ကို update လုပ်ပြီးပြaနာရှိနေသေးလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
©2021 MyJobs. ကမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်သည်!
PAYLAB သည် Alma Media လုပ်ငန်းစု၏ အဖွဲ့၀င်ဖြစ်သည်
MyJobs Myanmar 1st Floor, Diamond Center, Building E, Pyay Road, Yangon, 11061 Myanmar